Eventbrite + Tees spring: Amidio T-Shirt Miaraka amin'ny Tickets-nao | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 28, 2016 Zoma, Aprily 29, 2016 Douglas Karr
Miasa isan-taona izahay festival mozika sy teknolojia any Indianapolis isan-taona. Hetsika mahafinaritra iray izay itondrantsika tarika isam-paritra ary maka fialantsasatra iray andro hankalazana ny fitomboan'ny faritra ary koa hanangonana vola ho an'ny Fikambanan'ny leukemia sy ny Lymphoma.
Ny masoivohonay no mpanohana ny hetsika ary avy eo dia mahazo orinasa hafa handoa vola fanampiny izahay. Mampalahelo fa matetika, amin'ny ora farany vao miditra ny famatsiam-bola mpanohana… tsy mamela fotoana hanomanana drafitra be loatra!
Misaotra soa noho ny haitao! Amin'ny herintaona, hovaintsika kely ny famolavolana hetsika ary hifehy bebe kokoa izany. Hevitra lehibe iray izay hampiharintsika azo antoka fa ny fotoana ahafahana manambatra ny varotra ny tapakilanay miaraka amin'ny t-shirt hetsika. Eventbrite ary Teespring manana ny fametrahana fotsiny ny rafitra. Ampio fotsiny ny Teespring App amin'ny hetsikao ary amboary ny tee-shirt anao.
Ny fiaraha-miombon'antoka Eventbrite miaraka amin'i Teespring dia ahafahanao mampakatra haingam-pandeha amin'ny varotra, mametraka ny vidinao ary mamorona pejy an-tserasera avy hatrany ahafahan'ny mpanatrika sy mpankafy mividy. Ny varotrao dia aondraka amin'ny pejin'ny hetsikao.
Isaky ny tianao hifaranana ny fampielezan-kevitrao, dia hanonta sy hametaka ary hanome ny baiko rehetra amin'ny mpividy erak'izao tontolo izao i Teespring. Miaraha miasa amin'ireo mpanatrika anao ary andramo!
Fampahafantarana: Antsika izany Programme referrer Eventbrite rohy.
Tags: fisoratana anarana amin'ny hetsikaeventbritefetyentam-barotravarotra entanaT-shirttees springtapakila
3 lakilen'ny famokarana teknolojia marketing maranitra